Kooxda Horumarinta Lutheran waxay wax ka qabataa gees kale oo adag • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Guji si aad u aragto qorshayaasha dhulka
Isagoo fadhiya xudduudda Dutchtown-Gravois Park ee Chippewa iyo Minnesota, dhismaha laba dabaq ah waa gees-gees ka yimid xarunta Kooxda Horumarinta Lutheran. Dhismuhu waxa uu ka sarreeyaa 7,700 cagood oo laba jibbaaran, oo ku qotoma geesta goob ganacsi. Global Mart, oo caan ku ah iibinta maandooriyaha, rabshadaha qoryaha, iyo hawlaha kale ee qaska, ayaa hore u haystay bakhaarka. LDG waxay kala shaqeysay deriska si Global Mart loo xiro 2021 oo ay xoogaa nabad ah ugu soo celiso geesta Chippewa iyo Minnesota.
LDG waxa ay qorshaynaysaa in ay dib u habayn ku samayso 3025 Chippewa, iyada oo siinaya siddeed guri oo la awoodi karo dadka degan ama ka hooseeya 60% dakhliga dhexe ee aagga. Waxay sidoo kale raadin doonaan kirayste ku habboon 650 cag laba jibbaaran oo bannaan oo ganacsi oo gees ah.
Maalgelinta Dib-u-habaynta 3025 Chippewa
Qiimaha lagu qiyaasay iibka iyo dib u cusboonaysiinta dhamaystiran waxay noqon doontaa $700,000. Marka lagu daro deeqaha shakhsi ahaaneed iyo maalgelin dhaqameed, qayb muhiim ah oo ka mid ah maalgelinta mashruuca ayaa ka iman doonta deeqaha canshuurta gobolka Missouri oo ay bixiso Barnaamijka Kaalmada Guriyeynta La Awoodi Karo (AHAP). Ganacsiyadu waxay heli karaan dhibcooyinkan cashuurta iyagoo samaynaya tabarucaad u gaar ah mashruuca Kooxda Horumarinta Lutheran. Dhibcaha ayaa markaa ka dhigaya mas'uuliyadda cashuurta ganacsiyada heer ka sarreeya ka jarista tabarucaadka samafalka ah.
Tusaalaha Saamaynta Cashuurtu ku yeelan karto Deeqdaada
(Fadlan la tasho xirfadlahaaga cashuuraha-tusaalahan waxa loogu talagalay ujeeddooyin mudaaharaad oo keliya.)
Meherad leh dakhli saafi ah oo dhan $100,000 waxay keenaysaa masuuliyad cashuureed oo dhan $6,250 (iyada oo loo qaadanayo heerka canshuurta ganacsiga Missouri ee caadiga ah 6.25%). Marka ganacsigaas uu sameeyo $10,000 tabarucaad sadaqo ah oo uu ka jaro qiimaha dakhligooda la canshuuri karo, culeyskooda canshuureed waxaa lagu dhimi doonaa $5,250 ($90,000 x 6.25%).
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo la adeegsanayo dhibcaha cashuuraha AHAP, ganacsiyadu waxay helayaan qiimo dhimis dollar-dollar ah oo canshuurtooda ah taas oo ka soo horjeeda hoos u dhaca dakhliga la canshuuri karo. Iyadoo loo marayo AHAP, ganacsiyadu waxay helayaan credit credits oo u dhiganta 55% deeqdooda. Sidaa darteed, deeq isku mid ah oo ah $10,000 net $ 5,500 oo ah credit credits. Iyadoo loo qaadanayo isla dakhliga iyo heerka cashuurta sida kor ku cad, cashuurta ku waajibtay mar kale waa $6,250. Si kastaba ha noqotee, iyadoo la adeegsanayo dhibcaha canshuurta halkii laga jari lahaa, ganacsigu wuxuu ka saari karaa culayskooda canshuureed $ 5,500 - iyagoo ka tagaya biilkooda canshuurta kaliya $ 750. Dhibcaha canshuurta ee laga heli karo AHAP waxay ku siinaysaa hannaan aad u wanaagsan oo aad ku kordhin karto miisaaniyada samafalka ganacsigaaga iyadoo la taageerayo isbeddelka togan ee bulshadeena.
Macluumaad ku saabsan cashuur dhimisaha AHAP iyo tabarucaadka u qalma, kala xidhiidh Vicki Schrader at vikki@ldgstl.org ama (314) 922-9573.
Wax badan oo ku saabsan Kooxda Horumarinta Lutheran
La aasaasay 2015, Kooxda Horumarinta Lutheran waxay ku maalgelisay in ka badan $35 milyan horumarinta guryaha ee koonfurta St. Louis City. U adeegida in ka badan 200 oo qoys, shaqada LDG waxaa ka mid ah abuurista in ka badan 200 oo guri oo la awoodi karo, shan guri oo hal qoys ah, ka saarida cudurrada in ka badan 140 boosas bannaan, iyo horumarinta waxbarashada, farshaxanka, iyo goobaha bulshada.
Iyadoo in ka badan $30 milyan loo qorsheeyay mashaariicda mustaqbalka, LDG ma aha mid gaabis ah oo waxay si buuxda ugu heellan tahay hadafkeeda ah inay taageerto shakhsiyaadka si ay ugu noolaadaan nolol ujeedo leh, meel, oo loogu talagalay bulshada. Waxaan dhawaan iftiiminay xiisaha Guryaha Marquette mashruuc horumarineed oo la awoodi karo imanaya Dutchtown iyo Gravois Park.
Taageer Kooxda Horumarinta Lutheran
Sida kor ku xusan, ganacsiyadu waxay ka faa'iidaysan karaan dhibcooyinka cashuurta ee faa'iidada leh ee lagu bixiyo Barnaamijka Kaalmada Guriyeynta La awoodi karo. La xidhiidh Vicki Schrader si aad ugala hadasho deeqda ganacsigaaga.
Ku-deeqaha shakhsi ahaaneed dabcan mar walba waa la soo dhaweynayaa sidoo kale. Iyada oo loo marayo deeqda tartan ee ka Brown Sisters Foundationdeeqaha cusub ama kordhay ee LDG waxa laga yaabaa inay u qalmaan ciyaar dheeraad ah. Ku deeqa halkan.
Filimka hoos Estate Real. Muuji dhamaan qeybaha. Dutchtown, Housing, Iyo Estate Real. Muuji qaybo yar.
La wadaag qoraalkaan Facebook, Twitter, ama maraya Email. Qoraalkan ayaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay March 8th, 2022 .
DutchtownSTL.org Estate Real Kooxda Horumarinta Lutheran waxay wax ka qabataa gees kale oo adag